Lautaro Martinez Oo Doonaya Inuu Ka Tago Inter Milan?
HomeHoryaalka SpainLautaro Martinez oo doonaya inuu ka tago Inter Milan?
Weeraryahanka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez ayaa lagu soo waramayaa inuu si aad ah u doonayo inuu ka tago Nerazzurri sannadka 2021.
Xiddiga reer Argentine ayaa lala xiriirinayay inuu ku biirayo Barcelona xagaagii isagoo noqday bedelka Luis Suarez , laakiin saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay cudurka ‘coronavirus’ ayaa ka dhigtay in Blaugrana aysan lacag ku bixin karin inay la wareegto.
Natiija ahaan, Martinez wuxuu kusii nagaaday San Siro halkaasoo uu ku leeyahay lix gool iyo seddex caawin tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, laakiin 23 jirkaan ayaan weli qandaraaska u kordhin kooxda Antonio Conte ee 2023.
Sida laga soo xigtay Marca , Martinez ayaa u xilsaaray gorgortanka aadka loo qadariyo Jorge Mendes inuu raadsado koox cusub, inkasta oo Barcelona aysan wali lahaan doonin dhaqaalaha lagama maarmaanka u ah inay u dhaqaaqdo weeraryahankaan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Real Madrid ay ka mid tahay kooxaha loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karaan Martinez, laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaan u badneyn inuu meel kale u dhaqaaqi doono ilaa kooxaha ay ka yareeyaan culeyska dhaqaale ee haysta iyadoo ay jirto musiibo socota.
Martinez ayaa caawiye ka ahaa goolkii furitaanka ee Alexis Sanchez kulankii ay Inter 3/0 uga badisay kooxda Sassuolo kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A todobaadkan.